Maitiro ekugadzirisa iyo "Mazhinji Akavhurika Mafaira" Kanganiso paLinux
June 26, 2022 by Martin6
Pamakomputa eLinux, zviwanikwa zvehurongwa zvinogoverwa pakati pevashandisi. Edza kushandisa zvinopfuura chikamu chako chakanaka uye uchasvika padanho repamusoro. Iwe unogona zvakare kukanganisa vamwe vashandisi kana maitiro. Pakati pemamwe mabasa ayo egazillion, kernel yekombuta yeLinux inogara yakabatikana kutarisa kuti ndiani ari kushandisa mangani eanogumira sisitimu zviwanikwa, senge RAM uye CPU kutenderera. Iyo yakawanda-mushandisi system… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekugadzirisa iyo "Mazhinji Akavhurika Mafaira" Kanganiso paLinux
Gadzirisa "zita remushandisi harisi mune sudoers faira" Kanganiso muUbuntu
Kugadzirisa kukanganisa - username haisi mu sudoers faira. chiitiko ichi chichaitika. Gadzirisa zita rekushandisa harisi mune sudoers faira muUbuntu kana Debian. Chikonzero chekukanganisa "Zita remushandisi harisi mune sudoers faira. Iko kukanganisa kunotaurwa muUbuntu apo: Mvumo pa /etc/sudoers faira haina kuiswa ku0440. [Verenga zvakawanda ...] nezve Gadzirisa "zita remushandisi harisi mune sudoers faira" Kanganiso muUbuntu
Ambient Sound Player 'Blanket' Inotaridzika Zvirinani neGTK4 & libadwaita Port
Unoda kutamba mamwe manzwi echisikigo kana ambient ruzha paLinux? Blanket isarudzo yakanaka chaizvo ine inoyevedza mushandisi interface. Sekuziva kwedu, kune maviri akavhurika-sosi maapplication muLinux ekutamba ambient ruzha. Iwo 'Blanket' ane dhizaini yakanaka paUI yayo, uye 'Anoise' ine mamwe akawanda anotonhorera asi inotaridzika kushata. YeUbuntu 2, Fedora 22.04 kana Arch Linux mushandisi… [Verenga zvakawanda ...] nezve Ambient Sound Player 'Blanket' Inotaridzika Zvirinani neGTK4 & libadwaita Port
Isa Grub Customizer Kugadzirisa iyo Boot Menu muUbuntu 22.04
Kune vashandisi veLinux vanoda kugadzirisa iyo boot menyu skrini, Grub Customizer inogara iri sarudzo yakanaka kune vanotanga. Ndakanyora akati wandei matutorials nezve default boot-loader, iyo inonzi Grub, inosanganisira set default OS kubhutsu, kuisa madingindira, wedzera kernel paramita ye hibernate, tsika skrini yekugadzirisa, nezvimwe. Zvese zvinogona kuitwa kuburikidza neGrub. -Customizer kunze kwekugadzirisa ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Isa Grub Customizer Kugadzirisa iyo Boot Menu muUbuntu 22.04
TeXworks 0.6.7 Yakaburitswa! Maitiro ekuiisa muUbuntu kuburikidza nePPA
TeXworks, iyo yemahara yakavhurika-sosi application yekunyora zvinyorwa zveTeX (LaTeX, ConTeXt, nezvimwewo), yakaburitswa 0.6.7 nhasi. Heano maitiro ekuiisa muUbuntu 18.04, Ubuntu 20.04, Ubuntu 21.10, uye Ubuntu 22.04. TeXworks 0.6.7 yakawedzera zvimwe zvidiki zvinyowani, yakagadziridzwa yakasviba modhi rutsigiro, uye yakagadzirisa tsikidzi dzakasiyana. Wedzera mutongi ane dhairekitori zvinodhonza kune iyo PDF previewer Kuvandudza ... [Verenga zvakawanda ...] nezveTeXworks 0.6.7 Yakaburitswa! Maitiro ekuiisa muUbuntu kuburikidza nePPA
Yechina Yekuburitsa Ubuntu 20.04.4 yabuda neNew / Yakagadziridzwa Hardware Tsigiro
Chikwata cheUbuntu chakazivisa kuburitswa kweUbuntu 20.04.4 nezuro manheru, ine hardware inogonesa stacks, akawanda ekuchengetedza ekugadzirisa uye bug-gadziriso. 'Sezvakapfuura LTS akateedzana, 20.04.4 inosanganisira hardware inogonesa stacks kuti ishandiswe pane nyowani Hardware. Rutsigiro urwu rwunopihwa pazvivakwa zvese.' Linux Kernel 5.15 ichiri mune yakarongwa repository panguva yekunyora, nepo Kernel 5.13 ine… [Verenga zvakawanda ...] nezve The Fourth Point Release Ubuntu 20.04.4 yabuda neNew / Yakagadziridzwa Hardware Tsigiro
GIMP 2.99.10 yabuda! Nyowani 'Layer set', '.cur' faira & Yakavandudzwa Wayland Tsigiro
Iyo nyowani yekuvandudza kuburitswa kweinotevera hombe 3.0 yeakakurumbira mufananidzo mupepeti, GIMP 2.99.10, yabuda nezuro manheru! Iyo webhusaiti yeGIMP haizivise kuburitswa panguva ino. Zvinoenderana neyekugamuchira dialog, kuburitswa kutsva kwakaunza iyo nyowani 'Layer set' pfungwa yekutsiva 'Yakabatanidzwa layer'. Yakawedzerawo Microsoft Windows Cursor faira fomati (.cur mafaira) inotsigira, uye yakagadziridzwa ... [Verenga zvakawanda ...] nezveGIMP 2.99.10 yabuda! Nyowani 'Layer set', '.cur' faira & Yakavandudzwa Wayland Tsigiro
Iyo Tiling Terminal Emulator Tilix 1.9.5 Yakaburitswa
Tilix, iyo yakakurumbira tiling terminal emulator, yakaburitswa v1.9.5 ine mashoma mashoma maficha uye mamwe mabug-kugadzirisa. Tilix ndeye GTK+3 terminal emulator inotsigira kupatsanura hwindo reapp yakachinjika kana yakatwasuka. Inotsigira kudhonza uye kudonhedza zvakare kuronga materminal, quake mode, tsika hyperlink, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinhu. Mushure megore rebudiriro, yakazozivisa itsva 1.9.5… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iyo Tiling Terminal Emulator Tilix 1.9.5 Yakaburitswa
'AppImage Pool' - Software Center yeLinux Mapurogiramu seAppImage Packages
Unoda kumhanyisa Linux maapplication kuburikidza neAppImage package fomati? 'AppImage Dziva' inzvimbo yeapp yekutsvaga nekurodha zvaunofarira seAppImage. Mapurogiramu akawanda uye akawanda nhasi anoburitsa Linux mapakeji kuburikidza nepasirese Flatpak, Snap uye AppImage. Iwo maviri ekutanga ari nyore kuisa sezvo akanyatsobatanidzwa muUbuntu kana imwe Linux. Asi, AppImage isiri-kuisa inotakurika ... [Verenga zvakawanda ...] nezve 'AppImage Pool' - Software Center yeLinux Mapurogiramu seAppImage Packages
SF Tube - A Stylish YouTube App ine Kudhawunirodha Tsigiro
Kune akati wandei YouTube maapplication eLinux nhasi. SF Tube inyowani ine inoyevedza mushandisi interface ine nyore kushandisa yekurodha sarudzo. SF Tube, yaimbova FluTube, ndeyemahara uye yakavhurika-sosi app yakagadzirwa neGoogle's flutter. Parizvino, inopa mapakeji eLinux, Android, uye Windows. Iyo app inopa yakanaka mushandisi interface neImba, Senge, Dhawunirodha, uye ... [Verenga zvakawanda ...] nezveSF Tube - A Stylish YouTube App ine Kudhawunirodha Tsigiro
Itazve Tab/Arrow Key Navigation muKutarisisa & App Grid muGNOME 40/41
Haukwanise kufamba muZviitiko zvekutarisa uye app grid skrini uchishandisa Tab kana makiyi emiseve? Heino nzira yekugonesa zvakare chimiro kuburikidza nekuwedzera muGNOME 40 & 41. MuGNOME 3.x, mushandisi anogona kudzvanya Tab kana museve wepasi uye ipapo makiyi ekuruboshwe/kurudyi kuti afambe pakati peapp. windows mune yekutarisa skrini. Zvakare, makiyi anogona kushandiswa kufamba mu 'Ratidza Zvishandiso' grid yeapp. Navigation kuburikidza… [Verenga zvakawanda ...] nezve Re-Gonesa Tab/Arrow Key Navigation muKutarisisa & App Grid muGNOME 40/41
Maitiro ekuisa FFmpeg 5.0 muUbuntu 20.04 kana Ubuntu 18.04 kuburikidza nePPA
Iyo yakakurumbira FFmpeg multi-media raibhurari yakaburitswa vhezheni 5.0 nguva pfupi yadarika. Heano maitiro ekuiisa muUbuntu 20.04, Ubuntu 18.04 uye/kana Ubuntu 16.04 kuburikidza nePPA. FFmpeg 5.0, codename "Lorentz", kuburitswa kukuru kutsva kunoratidza: bvisa yekare encode/decode APIs uye uvatsive neN: M-based API. nyowani iri nyore kushandisa AVframe-yakavakirwa API ye libswscale. bvisa zvese… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekuisa FFmpeg 5.0 muUbuntu 20.04 kana Ubuntu 18.04 kuburikidza nePPA